Certified Digital Marketer | PHYO Institute
London Qualification Board မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့်
Certified Digital Marketing သင်တန်း
Digital Marketing ကိုပိုမို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိနိုင်စေရန် Qualified Digital Marketer တစ်ယောက်အနေ ဖြင့်ရှိသင့်သော knowledge များ ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန် professional certification program တစ်ခု ဖြစ်သော Certified Digital Marketer Program ကို PHYO Training Institute တွင်တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
ယခု ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသည့် Professional Certification ကို UK ရှိ ပညာ‌‌ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော London Qualifications Board မှ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကာလအတွင်းတွင်တော့ Online မှ Live Section ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနေပါသည်။
(Every week Tuesday and Thursday 7pm to 9pm)
(4 လ ကြာမြင့်ပါမည်)။
London Qualifications Board သည် UK ရှိပညာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ Learning Center ပေါင်းများမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီး International Recognized Diploma, Bachelor, Master နှင့် Ph.D. Degree များကို သင်ကြားပို့ချနေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
London Qualifications Board သည် UK ရှိ Ofqual Regulated Organization ဖြစ်သော Training Qualifications UK (ATHE UK), ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ European Global School, European International University, Switzerland နိုင်ငံရှိ Swiss school of Business and Management တို့ဖြင့် Postgraduate/ Undergraduate Program များကို ပို့ ချပေးလျက်ရှိသည်။
အသေးစိတ်ကို www.lqb.education တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သင်ကြားရမည့် Modules များ
Certified Professional Digital Marketer အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်လိုသူများ
နိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုသည့် Certified တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများ
Marketing Company ကြီးများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ
မိမိ၏ Career ကို Upgrade ပြုလုပ်လိုသူများ
Digital Marketing ကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး လုပ်ကိုင်နေသူများ
Digital Marketing အခြေခံရှိပြီးသူများ
Diploma in Digital Marketing လက်မှတ် ရရှိပြီးသူများ
သင်တန်းကြေး 600,000 MMK + (£100 နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ- for Exam and Registration Fee)
ယခုကာလတွင် တက်ရောက်လိုသူများအတွက် special discount ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းကြေး 350,000 MMK ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းကြေး အရစ်ကျခွဲသွင်းပြီး တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
U Aung Pye Phyo
Managing Director of PHYO TAKHUN Int'l Co.,Ltd,
Government Diploma in Electronics & Communication,
Diploma in Business Management & Administration
U AUNG PYE PHYO Founded PHYO Training Institute since 2009. Also teaching